Izixhobo ze-Android-iifowuni, iitafile, iwatchwatch kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 16)
IHuawei P30 Pro ihamba ngeGeekbench ngeKirin 980 kunye ne-8 GB ye-RAM
Ibhaliswe njenge 'Huawei VOG-L29' ('VOG' imfutshane kwiVogue, igama layo), iHuawei P30 Pro iye yadlula ngeGeekbench.
Isamsung icwangcisa ukumiliselwa kweflegi engabizi kakhulu kulo nyaka
Ulwazi olutsha luthi iSouth Korea yase-Samsung icwangcise ukwazisa ngefowuni esezantsi kuhlahlo-lwabiwo mali.
Ezona smartwatches zibalaseleyo zokunika ngemini kaTata
Ukuba awukasithathi isigqibo sokuthenga i-smartwatch, siya kukubonisa ukuba zeziphi ezinexabiso ngexabiso lokukhetha imali kwintengiso.
IXiaomi Black Shark 2 ihamba nge-AnTuTu kwaye ibhalise amanqaku amangalisayo angaphezulu kwe-430K
IXiaomi Black Shark 2 idlulile kwiqonga lovavanyo le-AnTuTu kwaye yabhalisa amanqaku aphezulu angaphezu kwama-430 lamawaka.
Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa kweNokia 6.2 ezivenkileni, eziza kwenzeka ngokusesikweni kule ntwasahlobo, njengoko sele kuveziwe.
U-Oppo ubonakala exakekile kutshanje, esebenza kuthotho lwayo olulandelayo lwe-OPPO Reno kunye netekhnoloji ye-zoom ye-10X. Ngoku unayo ilogo entsha.
I-Huawei ibhengeze ukuba i-Mate 20 yeeflethi zayo sele ithumele ngaphezulu kweeyunithi ezili-10 zezigidi kwiinyanga nje ezine ezinesiqingatha.
I-Samsung patent i-smartphone esongelayo entsha
Fumanisa ngakumbi malunga nepatent yefowuni entsha yokusonga evela kwifemu yaseKorea esebenza kwiinkqubo ezintsha ze-smartphone ze-2020.
UFitbit usandula ukuveza ingxelo entsha yeFitbit Versa, Lite, inguqulelo engabizi kakhulu esika izinto ezithile kuhlobo olupheleleyo.
Uvavanyo lwentsebenzo luye lwaboniswa lubonisa amandla e-Huawei P30 Lite. Ngaba kuya kwanela ukugqwesa abo ukhuphisana nabo?
Usekela Mongameli u-Brian Shen ubhengeze uthotho lweefowuni zika-Oppo, kwaye ibizwa ngokuba yi 'Reno'. Iselfowuni yokuqala yosapho iza kufika ngo-Epreli.
Uhlaziyo oluzinzileyo lwe-MIUI 10.2.3 lufika kwiPocophone F1 ngo-February security patch
I-Pocophone F1 ifumene olunye uhlaziyo, kwaye yi-MIUI 10.2.3.0. Lo uletha isiqwenga sokhuseleko ngoFebruwari 2019 nangaphezulu.
I-Vivo X27 Pro evulekileyo Ipowusta evuzayo yoyilo lweKhamera yePop-Up; Ukucaciswa kunye namaxabiso afunyenwe kwiX27 nakwiS1
IVivo izakusungula iVivo X27 kwakamsinya. Le fowuni iya kuba ne-Pro version eya kuza nekrini enkulu kunye nekhamera ye-selfie ebanzi.
Ukuvuza okucacileyo kwe-Sony Xperia 4: I-Snapdragon 710, i-21: i-9 CinemaWide ukubonisa nokunye
U-Sony unokusebenza kwi-smartphone enamandla ngakumbi kuneemodeli ze-Xperia 10, kwaye iya kuba yi-Sony Xperia 4.
Ikhonsoli kaGoogle iya kuba semthethweni kwiintsuku ezimbalwa
Ngo-Matshi 19 kwiNkomfa yabaPhuhlisi beMidlalo ekugqibeleni sinokudibana nekhonsoli yomdlalo wevidiyo ekudala ilindelwe kuGoogle, yayilixesha!
IHuawei Nova 4e ihamba ngeGeekbench ngeKirin 710 kunye ne-6 GB ye-RAM
Ngaphambi kokuba iHuawei Nova 4e isungule e-China kwiintsuku nje ezimbalwa zeentsuku, ifowuni yavela kwisalathiso se-Geekbench portal.
Ukubhuka kweGPS S10 kudlula ukuthengisa kweGPS S9 e China
Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yokubhukisha i-S10 e-China kwezi veki zinika ithemba kwi-Samsung.
Ezona zixhobo zilungileyo zokubonelela ngoMhla kaTata ngee-euro ezingaphantsi kwe-15
Ukudityaniswa kwezona zipho zibalaseleyo zoSuku lukaBawo ukuba ufuna isisombululo ngexabiso elifanelekileyo onokumothusa ngalo.
IGalaxy J8 ilungiselela ukufumana iPie ye-Android
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluya kumiliselwa i-Samsung Galaxy J8 eya kuthi ikwazi ukufikelela kwi-Android Pie ngo-Epreli walo nyaka.
Isamsung ilindele ukuthengisa i-45 yezigidi ze-Galaxy S10 kulo nyaka
Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso iSamsung enethemba lokuba nayo ngaphakathi koluhlu lweGPS S10, ethembisa ukugqitha kuluhlu lwonyaka ophelileyo.
Umphathi weBlackberry CEO akakuvumeli ukusonga ii-smartphones kuba "banobunzima kakhulu"
Ngokuka-CEO we-Blackberry, uJohn Chen, ukongeza kumaxabiso aphezulu kakhulu, ii-smartphones ezisongelayo zinobunzima kakhulu.
Ukucoca ixabiso elinokubakho kwi-Sony Xperia 1 eYurophu
Fumana ngakumbi malunga nexabiso eliye lavuza ukuba le Sony Xperia 1 inokuba nayo, eyenza kucace ukuba isiphelo esiphakamileyo asizukubiza.
Isamsung enokunxitywa ngoku iyafumaneka kuyilo olunye lwe-UI
Isicelo esinxibekayo seSamsung sihlaziyiwe sisebenzisa i-UI interface enye yeGlass ehlaziyiweyo kwiPie yePie
I-Xiaomi iya kuhambisa umsebenzi omtsha wokufikelela ngokuthe ngqo kwii -apps ngokufunda ngomnwe kwiscreen kwiMi 9 kunye neMi 9 SE
IXiaomi iya kuphumeza umsebenzi ovumela ukusetyenziswa kwescreen somfundi wokucoca iminwe ngqo kwaye ngokukhawuleza kuvulwe nayiphi na ...
IHuawei izakwazisa ii-smartphones ezimbini ezintsha ngaphandle kwe-Wear OS
Ii-smartwatches ezimbini ezilandelayo eziza kuqaliswa nguHuawei kwintengiso ziya kuqhubeka zilawulwa yi-Wear OS, ukubetha okungaphaya kumabango kaGoogle kwintengiso enxibekayo
I-Samsung Galaxy A90, i-A40 kunye ne-A20e ziye zavuza kwiwebhusayithi esemthethweni yase-Samsung yase-UK. Oku kuphakamisa ukuba ukukhutshwa kwabo kusondele.
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo kwi-Android Pie eqala ukufikelela kwi-Samsung Galaxy A8 + (2018) eRashiya kwaye iyanda.
Okwangoku le ntengiso ifumaneka eMelika kuphela kwaye ivumela ukufikelela kwiinyanga ezi-6 zasimahla zenkonzo yomculo weSpotify.
I-Galaxy S10 inokusetyenziswa njengendawo yokutshaja engenazingcingo ngelixa utshaja
Inkqubo yokubiza umva ye-Galaxy S10 iyakwazi ukutshaja ezinye izixhobo ezingenazingcingo ngelixa ihlawulisa ngentambo.
UXiaomi angabonisa iBlack Shark 2 ngo-Matshi 18
Isizukulwana sesibini seXiaomi's Black Shark sinokuhanjiswa ngokusesikweni ngoMatshi 18.
Le vidiyo yengcinga isibonisa uyilo olunokwenzeka lweSamsung yeGold 2
Sikubonisa umxholo wevidiyo osibonisa ukuba angangena njani emva kwe-Samsung Galaxy Fold 2. Ngaba uyayithanda uyilo lwefowuni yokusonga ye-Samsung?
UXiaomi ubhengeza ukuba iyonyusa ixabiso leefowuni ezintsha
Fumanisa okungakumbi malunga nokunyuka kwamaxabiso eziza kuthi xiaomi Iifowuni eziza kubetha ezivenkileni kwiinyanga ezizayo.
Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wokumiliselwa kwefowuni yokuqala ye-OPPO eya kuthi isebenzise itekhnoloji yayo ye-10x yokujonga oza kuba ngo-Epreli.
Fumanisa ipatent entsha evela kwi-ZTE ebonisa i-smartphone esonga ngokuthe nkqo, kanye embindini. Ilungelo elilodwa lomenzi elitsha lophawu lwaseTshayina.
Fumanisa yonke into malunga nohlobo olutsha lwefowuni, le Honor Magic 2 3D eza ne-3D sensor ngaphambili njengotshintsho oluphambili.
Sibeka ndawonye yonke imifanekiso yamaphephadonga emnandi yeGPS S10 egxile kwimingxunya kwiscreen evumela ubuchule obukhulu.
I-Realme ikhuphe inqaku layo leNightscape, elaqala kwiRealme 3, kwaye ngoku iya kufumaneka kwezinye izixhobo zenkampani.
Itekhnoloji yomdlalo weTurbo iza kuza kwiXiaomi Mi 8 Pro
IXiaomi Mi 8 Pro iyakufumana itekhnoloji entsha yeMidlalo yeTurbo ekhoyo kwiflegi entsha yenkampani, iXiaomi Mi 9.
Inqaku leRedmi 7 Pro liqhayisa ngemowudi yobusuku [Ifoto]
U-Lu Weibing ubonise imo yasebusuku yeRedmi Qaphela i-7 Pro ngefoto epapashwe kwi-Weibo, inethiwekhi yoluntu yaseTshayina.
I-Galaxy S10 inzima ukuyilungisa kunokuba ibingaphambi kwayo ngokwe-iFixit
Abafana kwi-iFixit bahlalutye iiterminal ezintsha zoluhlu lweGPS S10 kwaye inqanaba elifunyenweyo liphinda liphantsi kakhulu, njengangaphambili
Fumana ngakumbi malunga nokuchazwa kweHuawei P Smart + 2019, ifowuni entsha ekumgangatho ophakathi ukusuka kuhlobo lwesiTshayina esele lubonisiwe.
IHuawei P30 Lite iya kuziswa ngoMatshi 14
Sele sinomhla osemthethweni wokudibana neHuawei P30 Lite. "Ubhuti omncinci" we-P30 kunye ne-P30 Pro ufika kuphela kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwencopho yoluhlu
Fumanisa olu khetho lwee-smartphones onokuthi uzinike uSuku loBawo kulo nyaka. Iifowuni zazo zonke iindawo ezikhoyo,
Umphathi weSony uchaza ukuba kutheni inkampani ingazange ibe nazo iifowuni ezineekhamera ezinkulu
Umphathi omkhulu ka-Sony wentengiso u-Adam Marsh ngoku usityhilile isizathu sokuba u-Sony angaze akhuphe iifowuni ezineekhamera ezilungileyo.
Uyifaka njani i-Android Pie ezinzileyo nge-MIUI 10.2.1 kwiXiaomi Mi Max 3: uhlaziyo lufikile
UXiaomi uqalile ukukhupha uhlaziyo oluzinzileyo lwe-MIUI 10.2.1 olusekwe kwi-Android 9.0 Pie kwi-Mi Max 3, e-China, nge-OTA.
Fumanisa okuninzi malunga nokucinywa kokumiselwa kwe Meizu Zero kunye nezizathu ezikhutshwe yi-CEO yenkampani kule meko.
Xiaomi's Redmi Qaphela 7 ifika ngokusemthethweni eSpain
Fumanisa ngakumbi malunga nexabiso eliza kuba nalo iRedmi Qaphela 7 ekumiselweni kwayo eSpain kuzo zonke iinguqulelo zayo kunye nomhla wokuqaliswa kwayo.
I-Qualcomm ilungiselela i-chipset entsha yesiphelo esisezantsi: ivela kwi-Geekbench
I-Qualcomm yayisebenza kwi-chipset entsha ephezulu esezantsi eya kuthi isebenzise ii-smartphones ze-Android Go ezizayo.
Inqaku le-Meizu 9: Uluhlu lwenqanaba elitsha kraca olusemthethweni
Fumanisa ngakumbi malunga nokuchazwa kwe Meizu Qaphela 9, uluhlu oluphakathi lwentsingiselo yentsimbi yaseTshayina eza kuphehlelelwa kungekudala e-China.
IXiaomi Mi 9 iqala ukufumana uhlaziyo olutsha kunye nokuphuculwa kwekhamera
UXiaomi ukhupha uhlaziyo olutsha kuhlobo lwehlabathi lweflegi yakhe entsha, iXiaomi Mi 9. Le iza nokuphuculwa kwekhamera.
Nge-20 kaFebruwari, iSamsung yazisa ngokusemthethweni ukuzibophelela kwayo ekusongeleni ii-smartphones, ukubheja okuninzi ...
U-Sony ukwazile ukutsala umdla wentengiso nge-Xperia 1, i-smartpnone enemigca yesiko ezisa izinto ezininzi ezintsha
INokia 2 ifumana ingxelo ezinzileyo ye-Android Oreo ngohlaziyo olutsha
Emva phantse konyaka ukusukela oko yafumana inguqulo ye-beta ye-Android 8.1 Oreo, inguqulelo ezinzileyo yohlaziyo ngoku ikhutshelwa ngaphandle kwiNokia 2.
Igosa: iHuawei P30 Pro iya kuhlala ilensi yentsimbi ye "super zoom"
UClement Wong uqinisekisile ukuba iHuawei P30 Pro iza kuza nekhamera ye-periscope-zoom yekhamera eya kubonelela nge "super zoom".
UXiaomi uza kutyhila ezinye zeendaba eziza kuza kwi-MIUI
Fumanisa iingcebiso zabasebenzisi ezamkelwe nguXiaomi kwaye bazokwazisa nge-MIUI kungekudala, njengoko sele iqinisekisiwe.
I-Pocophone F1 ifumana inkxaso yokurekhodwa kwe-4K kwi-60fps ngohlaziyo
Uhlaziyo lwamva nje lwe-beta ngoku ekhutshelwa kwiPocophone F1 inenkxaso yokurekhodwa kwevidiyo ye-4K kwi-60fps.
Ezona fowuni zinamandla zi-10 ngoFebruwari 2019, ngokwe-AnTuTu
I-AnTuTu isizisela inqanaba le-10 ye-smartphones ezinamandla ngoFebruwari 2019.
ICorning isebenza kwiGlasi yeGorilla yokusonga iifowuni
Fumanisa ngakumbi malunga nophuhliso lweglasi yeGorilla esongiweyo ethi iCorning iphuhlise, ukuze isetyenziswe kwiifowuni ezisongelayo.
Fumanisa ngakumbi malunga nokubalulwa kwe-OPPO F11 esele ihanjisiwe yibhrendi kumnyhadala eIndiya kwaye izakufika kungekudala ezivenkileni.
Fumanisa ngakumbi malunga nokunikezelwa kwe-OPPO F11 Pro e-India, enkosi apho siyazi ngokupheleleyo imnxeba.
Isisombululo: Ikhamera ye-Huawei irekhoda kuphela ividiyo ye-HD, iShot Shot, i-Snapshot ekhawulezileyo kunye namacebo e-Huawei yakho
Ndikushiya neengcebiso ezinomdla kunye nesisombululo kwingxaki yokungakwazi ukutshintsha umgangatho wokurekhoda wesicelo sekhamera yeHuawei.
6,7 intshi kunye ne-32 mpx ngekhamera kathathu zezinye zeempawu zeGalaxy A60
Ukuchazwa kwe-Samsung yoluhlu oluphakathi lwaphakathi, i-Galaxy A60, ikhutshiwe, isiphelo sendlela esinesikrini esikhulu kunye neekhamera ezi-3 zangemva
Isikrini seSamsung seGPS S10 yeyona ilungileyo kwihlabathi le-telephony ngokwe-DisplayMate
Emva kokudlulela kwizandla zeDisplayMate, le nkampani ibanga ukuba iGPS S10 inescreen esifanelekileyo kwintengiso yefowuni.
Ifowuni ebalulekileyo ifumana inkxaso kwi-Digital Wellbeing ngoHlaziyo
Ukusebenza kakuhle kwidijithali kwakukhethekile kwiiPixels kunye neefowuni ze-Android enye okwethutyana, kodwa ngoku sele iqalile ukwenza indlela eya kwiFowuni ebalulekileyo.
Umbala we-6 ukufuphi: u-Oppo uza kubhengeza ishedyuli yohlaziyo ekupheleni kuka-Matshi
Isicwangciso sokuphucula i-ColourOS 6 siza kubhengezwa ekupheleni kuka-Matshi. Uluhlu lwaluza kuza kungekudala kwiifowuni ezininzi zenkampani.
Ifowuni ka-Oppo ye-10X yokusondeza iya kuba neeyunithi ezizigidi ezi-2 kwintengiso yayo yokuqala
I-VP ka-Oppo iphinde yabelana ngeenkcukacha malunga nokuqaliswa kohambo lwemodeli ye-Oppo engekaziwa eyokugcina itekhnoloji ye-10X yokusondeza.
I-Meitu T9 irejista amanqaku amanqaku aphambili kwikhamera kwi-DXOMark
I-Meitu T9 iza neekhamera ezimbini ngasemva kwaye ezimbini ngaphambili. I-DXOMark ifumene amanqaku ayo ngaphambili kwaye amanqaku ayo ebelungile.
IHTC iceba ukwenza ilayisensi yohlobo lwayo
Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zeHTC zokufumana ilayisensi yophawu lwabo ukuze baphume kwimeko yabo embi yezemali kwixa elizayo eIndiya.
Ngoku unokugcina i-Galaxy M20 eSpain
I-Samsung Galaxy M20 izokwaziswa kungekudala eSpain kwaye sele kunokwenzeka ukuyigcina ngokusemthethweni kwiAmazon phakathi kwezinye iiwebhusayithi.
Ukuqala ngomso ungayigcina i-Oukitel C13 Pro
Sithethile iiveki ezininzi malunga nokumiliselwa kwe-Oukitel, i-smartphone yeepokotho ezingabizi kakhulu. Siyathetha…
I-OxygenOS 9.0.4 ngoku iyafumaneka kwi-OnePlus 5 kunye ne-5T: ke unokuyifaka
I-OnePlus iqale ukukhupha uhlaziyo olutsha lwe-OnePlus 5 kunye ne-OnePlus 5T kwimpelaveki. I…
IHuawei Y7 2019: Uluhlu olutsha lokungena lwegama
Fumana ngakumbi malunga nokuchazwa kweHuawei Y7 2019, ifowuni yenqanaba elitsha lokungena kuhlobo lwaseTshayina, esele ihanjisiwe ngokusemthethweni.
IGPS S10 entsha, kwiinguqulelo zayo ezintathu, kunye neGPS M, nakwiinguqulelo zayo ezintathu, ifumene isatifikethi se-HDR esivela kwiNetflix
Lo ngumahluko kubomi bebhetri phakathi kweGPS S10e, S10 kunye ne-S10 +
Ividiyo eyenza izinto zicace umahluko kwibhetri phakathi kweemodeli ezi-3 zeGPS S10. I-S10 + ngokucacileyo iphumelele.
Ukuboniswa kwe-Samsung Galaxy Note 9 kunye neGalaxy Tab ye-S4 kwakuyi-gun yokuqala ye-Fortnite ...
Fumanisa ukucaciswa kweVivo V15, uluhlu oluphakathi oluphakathi lophawu lwesiTshayina olunekhamera yangaphambili enokurhoxiswa kunye neekhamera ezintathu zangasemva.
Amatyala okuqala eGlass Fold sele eyinyani
Fumanisa ngakumbi ngamatyala okuqala awaziswa yiSpigen yeGlass Fold eya kukhutshwa kungekudala, njengoko kuqinisekisiwe.
Ukucoca ixabiso le-Samsung Galaxy A40
Fumanisa ngakumbi ngexabiso lale Galaxy A40, uluhlu oluphakathi lwe-Samsung oluza kuba nayo xa isazisa ezivenkileni kungekudala.
Ukucaciswa okupheleleyo kwe-Hisense U30 enescreen esenziwe ngento egqityiweyo ivele kwi-TENAA
I-smartphone ye-Hisense U30 ivele kwiarhente ye-TENAA kunye nazo zonke iimpawu zayo kunye nokubalulwa kobuchwephesha.
I-Android Pie isondela kwi-OnePlus 3 kunye ne-3T: iza kwezi fowuni kungekudala
I-OnePlus ngumenzi we-smartphone okhula ngokukhawuleza oseke iingcambu zawo kwiminyaka nje embalwa. Usungule…
Inqaku leRedmi 7 Pro liza kuphehlelelwa e-China nge-Matshi 18 "ngezinye izinto ezimangazayo"
Ngomhla wamashumi amathathu anesibhozo ku-Matshi, iRedmi Qaphela i-18 Pro iza kuphehlelelwa e-China "ngezinye izinto ezimangazayo", ngokutsho kwe-teaser entsha e-CEO yomenzi wase-China osanda kukhupha.
Fumana ngakumbi malunga novavanyo lokunyamezela lukaJerryRigEverything olwenziwe yi-Samsung Galaxy S10 kwaye sele idlulile ngemibala ebalekayo.
Uhlaziyo olutsha lwe-MIUI likuvumela ukuba ufihle inotshi kwiXiaomi Mi 9
UXiaomi ukhuphe uhlaziyo lwe-MIUI lweXiaomi Mi 9 kunye neMi 9 yoHlelo oluNgafihliyo. Le iza nezisombululo.
I-Huawei Y6 2019 ngoku isemthethweni: Yazi iinkcukacha zayo
Fumanisa ngakumbi iinkcukacha ezipheleleyo zeHuawei Y6 2019, imodeli yenqanaba elitsha lokungena kwegama laseTshayina esele linikezelwe ngokusemthethweni.
I-Blackview BV9800, i-smartphone entsha erhabaxa eboniswe kwi-MWC 2019
IBlackview BV9800 yaziswa kwiNkomfa yeHlabathi yeHlabathi ka-2019 eBarcelona, ​​eSpain. Yazi iimpawu zayo, ixabiso kunye nokufumaneka.
Ngexesha le-MWC 2019, uyilo lwe-Ulefone Power 6 lwatyhilwa, kunye neempawu zayo eziphambili kunye neenkcukacha.
I-Realme 3 Pro inokuthi iqale ngo-Matshi 4 ecaleni kweRealme 3
Ngo-Matshi 4, u-Realme uza kuyikhupha i-Realme 3. Nangona kunjalo, i-teaser entsha ekhutshwe yinkampani ityhila ukuba i-Realme 3 Pro nayo inokubonakala.
Inqaku leMeizu 9 Lite lihamba nge-AnTuTu kwaye iinkcukacha zalo eziphambili ziyatyhilwa
Ifoto evuzayo yefowuni ebizwa ngokuba Meizu Qaphela 9 Lite iye yavela. Ukuvuza kuvele ezinye iinkcukacha ze-smartphone.
Umphathi weHuawei uthi uyilo lweGreen Fold alulunganga kwaye iMate X's ingcono
Umphathi weHuawei uRichard Yu kutshanje uthethe ngoyilo lweemodeli zombini kwaye ngokungathandabuzekiyo ukhetha iMate X ngaphezulu kweGolden Fold.
IVivo IQOO: Ifowuni yokuqala ye-IQOO isemthethweni
Fumana ngakumbi malunga nokuchazwa kweVivo IQOO, ifowuni yokuqala yentsingiselo entsha yaseTshayina esele ihanjisiwe ngokusemthethweni.
I-MIUI iya kongeza uphawu oluqhubekayo lweScreen ukuthintela ukuvulwa okungafunekiyo
IXiaomi iya kongeza uphawu oluqhubekayo lweScreen kwi-MIUI enkosi kwizindululo zamalungu oluntu lwaseMi.
I-Galaxy S10 iya kubandakanya umkhuseli wesikrini ebhokisini
I-Samsung Galaxy S10 kunye ne-S10 + iya kubandakanya isikhuseli esikhusini ebhokisini, umkhuseli wescreen ohambelana nesenzisi se-ultrasonic esidibanisa phantsi kwescreen
Amarhe aqinisekisiwe: ikhamera ye-Samsung Galaxy A90 iya kumangalisa ngokwenene
Eli lixesha lokuqala ukuba sithethe nge-Samsung Galaxy A90, ilungu elilandelayo lesizukulwana esitsha seGalaxy ...
UAsus uqinisekisa ukuba zeziphi iifowuni eziza kuhlaziya kwi-Android Pie
Fumanisa uluhlu lweefowuni zika-Asus eziza kufumana uhlaziyo kwi-Android Pie kulo nyaka, ziqinisekisiwe yinkampani.
Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso ze-Motorola zokuphehlelela ifowuni enokusongelwa njengoko iqinisekisiwe kumnyhadala wale veki.
Uyifaka njani i-EMUI 9 kwiHuawei Mate 9: uluhlu lade lwafikelela kwezi modeli
I-Huawei ikwenze ngokusesikweni ukukhutshwa kwe-EMUI 9 Personalization Layer ye-9 Mate 2016 yefowuni yefowuni yefowuni.
I-Lenovo Z6 Pro iya kufika inenkxaso yenethiwekhi ye-5G kunye nekhamera ye-Hyper Vision kuqwalaselo lwayo. Iya kuba kwiflegi elandelayo yenkampani.
Ukudityaniswa kwezixhobo ezilungileyo onokuzifumana ukuba ujonge ukuthenga iifowuni eziphezulu ezinezaphulelo ezinkulu kwiAmazon.
I-smartphone ye-IQOO, eya kuza nenkxaso ye-44W Super FlashCharge technology, inokuhlawuliswa ukuya kuthi ga kwi-50% kwimizuzu nje eyi-16.
Ezi zezona wallpapers zimnandi onokuba nazo kwi-Samsung Galaxy S10 kunye ne-S10 +
Ngaba ufuna ukuthenga i-Samsung Galaxy S10 okanye i-Samsung Galaxy S10 +? Ungalibali ukukhuphela ezi wallpapers zimangalisayo ukuze uzenze ngendlela ekhethekileyo.
Okokugqibela i-Apple Music ayizukufikelela kwiKhaya likaGoogle, yayiyimpazamo yebug
Okokugqibela kubonakala ngathi ukumiliselwa kweApple Music kwikhaya likaGoogle kungenxa yesiphene kwisicelo.
I-Samsung Galaxy A10 ngoku isemthethweni: Infinity-V kunye nexabiso elimangalisayo
Okokugqibela, i-Samsung ivelise i-Samsung Galaxy A10, inqanaba elitsha lokungena kwifowuni evela kumenzi onamaxabiso anomdla.
Oku kuyakuba kuyilo olucacileyo lweHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro
Imifanekiso yemithombo yeendaba yeHuawei P30 kunye neHuawei P30 Pro ikhutshiwe ingqina ukuba izixhobo zeHuawei ekudala zilindelwe ziya kujongeka kanjani
Inqaku leRedmi 7 Pro yaziswa ngokusemthethweni
Fumanisa iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwaziswa kweRedmi Qaphela i-7 Pro esele inikezelwe ngokusemthethweni kumnyhadala waseIndiya.
Akusayi kubakho fowuni isongelwe kwi-OnePlus: zezi zizathu
I-OnePlus ichaze ezona zizathu ziphambili zokuba kutheni inkampani ingazukuvula ifowuni esongelayo, ubuncinci kwixesha elifutshane.
Imbeko yokumilisela i-smartphone esongekayo ngo-2020
Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso ze-Honor zokuzisa ifowuni yayo yokuqala esongekayo kwintengiso, into engayi kubakho kude kube ngunyaka olandelayo.
I-Galaxy M30: Uluhlu oluphakathi lwe-Samsung lugqityiwe
Fumanisa ngakumbi malunga ne-Samsung Galaxy M30, i-smartphone entsha ekumgangatho ophakathi kwifemu yaseKorea ethiwe thaca ngokusemthethweni.
Guqula ibha yomgangatho, useto olukhawulezayo kunye nokunye kwi-Samsung Galaxy kunye ne-Android Pie nge-One UI Tuner
Nge-One UI Tuner ungenza ngokwezifiso i-Samsung Galaxy yakho ihlaziyiwe kwi-Android Pie. Insiza evela kwi-XDA.
I-Doogee S90 yeemodyuli ze-smartphone kunye netekhnoloji ye5G ibhengeziwe kwi-MWC 2019
Kwi-Mobile World Congress (MWC) 2019, uphawu lwaseTshayina u-Doogee lwazisa ngeemodyuli zalo ze-5G, iDoogee S90, ngasemva kweengcango ezivaliweyo.
I-OnePlus 7 iya kuqhubeka ngaphandle kokubheja kwinkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo
Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwi-OnePlus kuya kuqhubeka nokuba liphupha kubo bonke abasebenzisi abathembele kulo mvelisi, kuba i-OnePlus 7 ayizukuyidibanisa nayo.
IXiaomi Black Shark Skywalker iqinisekisiwe kwaye ifoto ivuza uyilo lwayo
IXiaomi Black Shark 2 ifumene isatifikethi se3C e China. Amanye amarhe athi inokuthi ifike kwintengiso njenge-Black Shark Skywalker.
Iifoto ezibonisa ukusondeza kwe-10X yeHuawei P30 Pro kuza kukhanya
Kukho imiqondiso yokuba uHuawei unokumilisela iP30 Pro ngelensi ye-periscope eya kuthi ivumele isixhobo ukuba siphumelele kwiifoto ezingcono nge-10X zoom.
IXiaomi Mi MIX 3 5G: Ifowuni yokuqala yeXiaomi ye-5G isemthethweni kwaye sayivavanya yona
I-Xiaomi Mi MIX 3 5G: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nokubalulwa kwenguqulo ye5G yefowuni.
Fumana ngakumbi malunga neefowuni ezityhilwe ngokusemthethweni yi-OUKITEL kwi-MWC 2019 kwaye izakubetha ezivenkileni kungekudala.
Fumana ngakumbi malunga ne-TCL kunye ne-Alcatel yokusonga i-prototype esele ibonwe kwi-MWC 2019 e-Barcelona.
Umenzi wewotshi wamazwe aphesheya uSwatch ufake isimangalo nxamnye neSamsung, ibango, ikopa ukucofa kwezinye zeewotshi zayo ezaziwa kakhulu.
I-Samsung Galaxy A10 2019, ifowuni entsha enexabiso eliphantsi yakwaSamsung, ivela kwindawo ngaphambi kokunikezelwa kwayo
Imifanekiso yokuqala esemthethweni yefowuni entsha enexabiso eliphantsi yakwaSamsung iye yavuza. Sithetha nge-Samsung Galaxy A10 2019 enokuboniswa ngomso.
Ungayithenga i-HTC Eksodus ngemali yokwenyani
Fumanisa ngakumbi malunga notshintsho lweHTC kwisicwangciso esiya kukuvumela ukuba uthenge imodeli yeEksodus ngemali yokwenene ukusukela ngoMatshi.
Intlawulo ekhawulezayo engama-55W iya kuba ye-Huawei Mate X kuphela
Fumanisa ngakumbi nge-55W ye-Huawei ekhawulezayo yokutshaja, eya kuthi ngalo mzuzu ihlale kuphela kwiHuawei Mate X eqinisekiswe luphawu.
Isamsung ichaza ukuba kutheni i-Samsung Galaxy Fold ingazukuvavanywa ezivenkileni
Isamsung iqinisekisile ukuba i-Samsung Galaxy Fold izakuba kwezinye iivenkile, kodwa ayizukubonakala nangayiphi na indlela. Kutheni usenza esi sigqibo?
Ukudlala +: Itekhnoloji entsha yokuphucula intsebenzo
Fumana ngakumbi malunga neGaming + itekhnoloji entsha eye yaziswa yi-Honor ukuphucula ukusebenza kweprosesa xa udlala imidlalo.
Le mifanekiso yokwenene iqinisekisa uyilo lweMeizu M16S Plus
Imifanekiso yokuqala yesixhobo sele ivulekile, iqinisekisa uyilo lweMeizu M16S Plus emele iifreyimu zayo ezincinci kunye nescreen esikhulu.
IHuawei ayizukuvuma ukumilisela "iingcango zangasemva" kuthungelwano lonxibelelwano eTshayina
U-Huawei wayenomcimbi wokushicilela eCanada kwiveki ephelileyo apho umongameli wakhe wazama ukuthomalalisa uloyiko olunxulunyaniswa netekhnoloji ye5G.
IXiaomi Mi 8 SE ifumana imowudi yeSuper Night Scene ngohlaziyo
I-middle-range Xiaomi Mi 8 SE ifumene uhlaziyo olutsha lwe-OTA oluzisa imowudi yekhamera yeSuper Night Scene.
Fumanisa ngakumbi ngesi sivumelwano sokuba uXiaomi uvale ngokuKhanya, onoxanduva lokuphucula iikhamera zeNokia 9 PureView.
I-Android Pie ikhutshelwe iNokia 3.1 Plus
Umlawuli weMveliso yeHlabathi ye-HMD ubhengeze ukuba uhlaziyo lwe-Android Pie sele lukhutshelwa kwiNokia 3.1 Plus.
I-Galaxy S10 ihlawulisa i-iPhone XS ngokukhawuleza kunakwitshaja ye-Apple
Ngubani ongathi, kodwa ngeGPS S10 i-iPhone XS inokuhlawuliswa ngokukhawuleza kunetshaja yayo. Ibonisa ubuthathaka be-iPhone kwizityholo.
Ukucoca iibhentshi zokuqala zeSamsung yeNqaku le-10 engqina inxenye yokubalulwa kwayo
Iibhentshi zokuqala zeSamsung ye-10 ye-Samsung ziye zavuza, apho sinokuqinisekisa ngokudibana kwayo kwe-5G, ukongeza kwi-RAM kunye neprosesa ye-phablet.
I-Sony's 5G yeprotot prototype eboniswe kwi-MWC 2019
Isiphelo sendlela yovavanyo lwe5G Sony sivelisiwe kwiFowuni yeHlabathi yeNkomfa ye2019, eBarcelona, ​​kwizitendi zakwaSony naseQualcomm.
Umvelisi waseMelika uye wothuswa kukubonisa i-Energizer Power Max P8100S, ifowuni esongeke kakhulu: ezi ziimpawu zayo.
Fumanisa ngakumbi malunga nokubalulwa kwe-LG V50 5G, isiphelo esitsha sophawu lwentengiso yaseKorea nge5G eboniswe kwi-MWC 2019.
Ukuhambelana okulindelweyo kwePocophone kunye nenkonzo ye-HD yokuhanjiswa kweenkonzo zevidiyo sele kuza kufika ngohlobo lohlaziyo nge-OTA
I-Samsung Galaxy S10 entsha ngoku isemthethweni. Ukuba ufuna ukwazi zonke iinkcukacha, ixabiso kunye nokufumaneka, siya kukubonisa oko.
Fumanisa iinkcukacha ezipheleleyo ze-Sony Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus, ii-smartphones zeSony ezikwisikrini esitsha ezibonakaliswe kwi-MWC 2019.
Fumanisa iinkcukacha ezipheleleyo zeSony Xperia 1, isiphelo esitsha esitsha sikaSony esivezwe ngokusemthethweni kwi-MWC 2019.
Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kweNokia 9 PureView eSpain, ngoku ngexabiso kunye nomhla wokukhutshwa kwefowuni waziwa.
I-Wiko View3 kunye ne-View3 Pro: Ikhamera kathathu kumbindi ophakathi
Fumanisa yonke into malunga neWiko View3 kunye nePro3 Pro, uluhlu olutsha lwenqanaba elitsha oluthiwe thaca ngokusemthethweni kwi-MWC 2019 e-Barcelona.
Iinkcukacha zokuqala zekhamera yeSamsung yeNqaku 10, ekhomba phezulu kakhulu
Sele sinolwazi lokuqala kwilungu elilandelayo losapho lweNqaku lomenzi waseKorea: Ikhamera ye-Samsung Galaxy Qaphela amanqaku ali-10 aphezulu kakhulu.
I-OUKITEL C12 ifika, eyona ndleko iphantsi igcwele kwimarike
I-OUKITEL C12 ifikile, umxholo omtsha wexabiso eliphantsi le-smartphone ene-6,18 "isikrini esine-notch, ikhamera emibini, umfundi weminwe kunye ne-3300 mAh
I-Nubia Alpha: I-smartphone esongelayo ukunxiba esihlahleni
Fumanisa ngakumbi ngeNubia Alpha, isixhobo esitsha esinefowuni esongekayo, esingumxube phakathi kwewotshi kunye ne-smartphone eboniswe kwi-MWC 2019.
Sebenzisa eli thuba kwaye uthenge i-Ulefone Armor 5 nge-euro ezili-155 kuphela
Ukuba ucwangcisa ukuvuselela i-smartphone yakho kwaye ujonge imodeli erhabaxa, kusenokwenzeka ukuba isithembiso esenziwa nguTomTop kuthi sibe nomdla kuwe.
Kwividiyo: nantsi indlela uKumkani wozuko aqhuba ngayo kwiHuawei Mate X
U-Huawei wabelane ngevidiyo ye-Mate X esetyenziswayo noKumkani wozuko, umdlalo odumileyo kaTencent, obaleka kwiscreen.
I-Samsung Galaxy A30, uluhlu oluphakathi lwaseMzantsi Korea olusemthethweni lusemthethweni
Sele sithethile nawe malunga ne-Samsung Galaxy A50 kutshanje. Ngoku siza kuyenza nge-Galaxy A30, umntakwabo omncinci wokuqala ...
Umdyarho weefowuni ezisongekayo sele uqalile. Isamsung kunye neHuawei zisungule iimodeli ezimbini ezahlukeneyo kodwa zinokusebenza okufanayo: ukusonga isikrini
I-Galaxy A50: Uluhlu oluphakathi lwe-Samsung
Fumana ngakumbi malunga nokuchazwa kweGPS A50, uluhlu oluphakathi lwe-Samsung esele luboniswe ngokusemthethweni kwi-MWC 2019.
I-ZTE Axon 10 Pro: Ifowuni yokuqala yophawu ene5G
Fumana ngakumbi malunga nokuchazwa kwe-ZTE Axon 10 Pro, ifowuni yokuqala ye-5G evezwe yi-MWC 2019.
Isamsung ukuphinda yenze uluhlu lweGPS S kunyaka olandelayo
Kungenzeka ngakumbi ukuba iimodeli ezilandelayo zeGlass S, ayizukuba yi-S11, kuba inkampani ifunda ngokutshintsha kwegama kwisigama.
Iselfowuni iveza ii-smartphones zayo ezintsha kwi-MWC 2019
Fumanisa ngakumbi malunga neefowuni ezintathu ezintsha ezinikezelwe yiAlcatel ngokusemthethweni kwi-MWC 2019 kwaye iinkcukacha zabo zisemthethweni.
I-Asus ZenFone 6 izakuqalisa ngoMeyi 14 eValencia, eSpain
I-ASUS izakwazisa imodeli elandelayo yeZenfone ebizwa ngokuba ngu-Asus Zenfone 6 kule May 14 izayo eValencia, eSpain.
I-Oppo T1, iflegi efikelelekayo ene-Snapdragon 855 ezayo
Kubonakala ngathi u-Oppo angabhengeza umgca omtsha wee-smartphones kungekudala. Umfanekiso wefowuni ezayo ebizwa ngokuba ngu "Oppo ...
Sele isemthethweni, ixabiso leXiaomi MI 9 liphantsi kakhulu kunokuba bekulindelwe, kwaye ayizukubiza kuphela i-449 € kunyuselo, eli lixabiso loguqulelo lwe-6/64 GB
Fumanisa ngakumbi malunga ne-LG G8 ThinQ, isiphelo esitsha sophawu lwenkampani yaseKorea eneenkcukacha ezichaziweyo kwi-MWC 2019.
I-TCL ibonakalise iiprototypes ezininzi zokusonga ii-smartphones kwiNkomfa yeHlabathi yeBhola e-Barcelona, ​​eSpain.
Fumana ngakumbi malunga noluhlu olutsha lwee-smartphones uNokia azise ngokusesikweni kwi-MWC 2019 e-Barcelona kumsitho wayo.
Fumanisa ngakumbi ngeNokia 9 PureView kunye nokucaciswa kwayo, ethiwe thaca ngokusemthethweni kwi-MWC 2019 eBarcelona.
Fumana ngakumbi malunga nokuchazwa kwe-Huawei Mate X, ifowuni yokuqala esongwayo kaHuawei ityhilwe ngokusemthethweni kwi-MWC 2019.
Namhlanje ngoFebruwari 24, 2019, kumanqaku e-MWC19, iHuawei izakuveza ezona mveliso zayo zintsha, phakathi kwayo kulindeleke ukuba iHuawei Mate X entsha, eya kuba sisiphelo sokuqala semaraca yemvelaphi yaseTshayina ngokusonga isikrini okanye isikrini esiguquguqukayo.
I-Huawei izakubhengeza i-smartphone yayo esongelayo kwiintsuku ezimbalwa kwi-Mobile World Congress 2019 e-Barcelona, ​​eSpain. Iya kukhutshwa njenge-Mate X.
Ezinye zeempawu zeHuawei P30 Lite ziye zavuza ngeTENNA, eqinisekisa ubungakanani bescreen, ibhetri kunye nobukhulu.
Yonke into esiyilindeleyo kwi-Sony kwi-MWC 2019
Sineenkcukacha ngayo yonke into esiyilindeleyo kuSony kwiNkomfa yeHlabathi yeHlabathi ka-2019 eBarcelona, ​​eSpain. Fumanisa ukuba inkampani yaseJapan isigcinele ntoni!
Ngoku unokukhuphela ii-wallpapers zeXiaomi Mi 9
Ngoku unokukhuphela ii-donuts zesikrini zeXiaomi Mi 9 ukuze ukwazi ukwenza ifowuni yakho ibe nembonakalo elingana naleyo yeXiaomi.
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo oluzinzileyo lwePie yePie esele iza kwiXiaomi Mi 8 Lite kunye neXiaomi Mi Max 3 kwezi iiyure.
Ixabiso leXiaomi Mi 9 eSpain sele isemthethweni
Fumanisa ngakumbi ngexabiso lokwazisa ukuba iXiaomi Mi 9 iya kuba nayo ekufikeni kwayo eSpain njengoko kubonwe kwiwebhusayithi yenkampani.
Fumana ngakumbi malunga nokusonga ii-smartphones esaziyo ukuba siya kuba nakho ukubona ngokusemthethweni kwi-MWC 2019 eqala ngomso.
I-Realme 3 iyakwenziwa ngokusemthethweni kulo Matshi 4 uzayo e-India. Oku kungqinwe yinkampani ngeposta esemthethweni.
IHuawei ivule ivenkile yayo yokuqala ngaphandle kwe China eVienna, eOstriya
Umenzi waseTshayina uza kuza nevenkile engaxhunyiwe kwi-intanethi eVienna, e-Austria, ngehlobo lalo nyaka. Iya kuba yeyokuqala ngohlobo lwayo ngaphandle kwe China.
I-OnePlus izokwazisa nge-5G iselfowuni kwikota yesibini
Fumana ngakumbi malunga nezicwangciso zebrendi zokuphehlelela iselfowuni nge5G kwintengiso kwikota yesibini yalo nyaka.
UDonald Trump ufuna i-US ibe nguvulindlela kwinethiwekhi ye-6G kwaye ikhuthaza iinkampani ukuba zenze njalo
UDonald Trum ufuna ukumiliselwa kwe-6G kungekudala elizweni. Gcina ukhumbula ukuba inethiwekhi ye-5G ivavanywa nje.
Isamsung iyakuqinisekisa: ukuba uneGlass ene-UI enye unokufaka imephu kwiqhosha leBixby
Oko kukuthi, wonke umntu ohlaziya kwi-Android Pie uya kuba nakho ukwenza imephu kwiqhosha le-Bixby ukusebenzisa nayiphi na inkqubo enelo qhosha lingasetyenziswanga.
Inqaku leMeizu 9 libhalisa ngaphezulu kwe-175k kwi-AnTuTu enkosi kwi-Snapdragon 675 kunye ne-6 GB ye-RAM
Kwiqonga lokulinganisa lomlinganiso we-AnTuTu, inqanaba elizayo le-Meizu Inqaku le-9 eliphakathi lirekhodile amanqaku ayi-175,987.
I-Sony Xperia XZ4 iphinde yavuza kwakhona ngaphambi kokumiliselwa kwayo, kodwa njenge "Xperia 1"
I-Sony Xperia XZ4, ifowuni elandelayo yeflegi yenkampani yaseJapan, iphinde yavela kwakhona, kodwa phantsi kwegama elithi "Xperia 1".
INokia 6 (2017) iqala ukufumana iPie ye-Android kuhlaziyo lwayo lwamva nje
I-HMD Global iqale ukukhupha uhlaziyo lwamva nje lwe-Android 9 Pie yeNokia 6, ibanga eliphakathi eliqalise kwi-2017.
Intsapho entsha ye-Samsung Galaxy S10 iya kungena ezimbalini ngenxa yezinto ezininzi, kwaye phakathi kwabo ngokugweba inotshi ukuba ibulawe.
Fumanisa malunga nokunyuka kwentengiso kaHuawei kwintengiso yamanye amazwe kunyaka ophelileyo, eyona ikhule kakhulu ehlabathini.
Imifanekiso esemthethweni yeNokia 9 Pureview sele ivuliwe ngaphambi kokumiliselwa kwayo
Ngaphambi nje kokuba iNokia 9 Pureview isungule kwi-MWC 2019, imifanekiso yayo yaseburhulumenteni ivele kwiwebhu.
Iinkcukacha oziphosileyo malunga neGalaxy S10: izaziso ze-LED ezilungileyo, imephu yeBixby kunye nokunye
I-Galaxy S10 ziifowuni ezinomtsalane, kodwa ngokuqinisekileyo ukuba uyazazi ezinye iinkcukacha, unokufumana into elungileyo.
Umahluko phakathi kwe-Samsung Galaxy S10 kunye ne-Samsung Galaxy S9, ngaba kufanelekile ukuba utshintshe?
I-Samsung Galaxy S10 okanye i-Samsung Galaxy S9? Ngaba ukuvelisa izinto ezintsha kwanele ukuhlawula ii-euro ezingama-400 ngaphezulu? Sikubonisa umahluko wabo ophambili.
Isamsung ithengise i-2 yezigidi zeedola kwii-smartphones phantse ezilishumi
U-DJ Koh utyhile ukuba i-Samsung ithengise inani elikhulu lee-smartphones ze-Galaxy okokoko iimodeli zokuqala zashiya umzi-mveliso ngo-2010.
I-Oukitel C15 Pro iya kufika kwimarike nge-Android 9 Pie kunye ne-5G ehambelanayo
Amarhe amva nje ahambelana nenkampani ye-Oukitel acebisa ukuba i-C15 Pro izakufika kwintengiso nge-Android 9 Pie
Igosa: inqaku le-Meizu 9 liza kufika ngo-Matshi 6 ngesitayile!
Namhlanje, uMeizu uqinisekisile, ngokusebenzisa iakhawunti yakhe yeWeibo, ukuba kwinqanaba eliphakathi elilandelayo, iMeizu Qaphela 9, iya kwenziwa ibe semthethweni ngo-Matshi 6.
I-Oppo F11 Pro ibonakala kwizandla-kwividiyo kwaye ityhila uyilo lwayo lokwenyani
Ividiyo-yezandla ye-Oppo F11 Pro ibonakalise ukuvela kwayo ngokwenyani. Ikhamera engasemva kabini kunye nezinye iinkcukacha zinokubongwa.
I-HMD Global isungula i-Android 9 Pie (uHlelo loHambo) yeNokia 2.1
I-HMD Global ibhengeze ukumiliselwa kwe-Android 9 Pie (Go Edition) yeNokia 2.1, enye yezona zixhobo zifikelelekayo zefemu.
I-Samsung Galaxy A sele inomhla wentetho
Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wenkcazo ye-Samsung Galaxy A, udidi oluphakathi lwegama laseKorea, oluthiwe thaca ngoFebruwari 28.
I-UMIDIGI S3 Pro: Iflegi entsha yohlobo olunokuthi uthathe iraffle
Fumana ngakumbi malunga nolu phawu UMIDIGI S3 Pro onokuyithenga kwi-Indiegogo kwaye unokufumana simahla kunikezelo kwiwebhu.
I-LG Q60: Uluhlu oluphakathi oluphakathi kunye nekhamera engasemva kathathu
Fumanisa ngakumbi malunga nokubalulwa kwe-LG Q60, uphawu lwentengiso oluphakathi kwinqanaba elitsha oluza nekhamera yangemva kathathu
Fumanisa yonke into malunga neVivo V15 Pro, udidi oluphakathi lwentsingiselo yentsimbi yaseTshayina enekhamera ebuyisekayo kwaye sele ihanjisiwe.
I-DXOMark ityhile amanqaku ekhamera yeXiaomi Mi 9, ikhupha amandla ayo anomdla wokufota. Bazi ngakumbi!
Ifoto yokwenyani yokuvuza kwe-OnePlus 7 kwaye ityhila uyilo lwekhamera ezivelelayo
Ifoto entsha esandula ukuvuza ibonisa ukuba i-OnePlus 7 yeflegi iza kufika nescreen ngaphandle kwenotshi, ukuze kuxhotyiswe ikhamera ephumayo.
UXiaomi ubhengeza itshaja ezintathu ezingenazingcingo: idesktop, imoto kunye nebhanki yamandla ye-10.000 mAh
Ukongeza kuthotho olutsha lweXiaomi lweMi 9, inkampani yaseTshayina ikwatyhile izixhobo zokutshaja ngaphandle kwamacingo izolo. Sibazisa kuwe!
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo kwi-Android Pie eqala ukufika ngendlela ezinzileyo kwiGPS S8 kwamanye amazwe aseYurophu.
Sidibene ne-Samsung Galaxy Buds, ii-headphone ezinempawu ezaneleyo zokugqibela ukubethelela i-Apple's AirPods.
Isamsung yazisa ukuba zeziphi izinto ezinxibekayo ezimbini, iGlass Watch Acitve kunye neGPS Fit. Izinto ezimbini ezinxitywayo kwiimfuno ezahlukeneyo.
Fumana konke malunga neGolden Fold, i-Samsung esonge i-smartphone. Ukucaciswa kwayo ngokusemthethweni, amanqaku, amaxabiso kunye nokukhululwa.
I-LG K40 kunye ne-LG K50: Uluhlu olutsha olusembindini ophakathi nokhuseleko emkhosini
Fumanisa ngakumbi malunga neemodeli ezintsha ze-LG eziphakathi, i-LG K40 kunye ne-LG K50 esele zinikezelwe ngokusemthethweni.
Fumanisa zonke iinkcukacha zohlelo lweXiaomi Mi 9 Transparent Edition, ukongeza kumhla wokukhutshwa kunye nexabiso eliza kuba nalo.
Fumanisa ukuba singayilandela njani ngoku bukhoma inkcazo ye-Samsung Galaxy S10 kunye neGolden Fold, i-brand's folding smartphone.
I-Xiaomi Mi 9 SE: I-premium entsha ye-brand mid-range
Fumanisa iinkcukacha ezipheleleyo zeXiaomi Mi 9 SE, ipremiyamu entsha yaphakathi kwinqanaba kuluhlu lwegama laseTshayina esele linikezelwe ngokusemthethweni.
IXiaomi Mi 9 ngoku isemthethweni: Isiphelo esitsha sophawu
Fumanisa ngakumbi malunga nokuchazwa kweXiaomi Mi 9, isiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina esithe sanikezelwa ngokusemthethweni namhlanje.
I-ARCHOS iveza i-Oxygen 57, 63 kunye ne-68 XL phambi kwe-MWC
Fumanisa iinkcukacha ezipheleleyo ze-ARCHOS Oxygen 57, 63 kunye ne-68 XL, isiphelo esitsha esisezantsi sophawu lwaseFrance ngaphambi kweMWC 2019.
Fumanisa ngakumbi malunga nokucaciswa kweVivo U1, inqanaba elitsha lokungena kwinqanaba le-smartphone elivela kuhlobo lwaseTshayina oluthiwe thaca ngokusemthethweni.
Fumanisa okungakumbi malunga negama lefowuni yokusonga yakwaSamsung eya kuba nayo, eqinisekisiweyo ekugqibeleni ukuba iyiGolden Fold.
Ushicilelo olucacileyo lweXiaomi Mi 9 luvela kwiGeekbench nge12 GB ye-RAM
Umahluko ocacileyo weXiaomi Mi 9 ubhalisiwe kwindawo yogcino lweGeekbench ene-12 GB ye-RAM kunye nezinye iinkcukacha.
AbakwaSony bakumema ukuba "uthathe umbono omtsha" kumnyhadala we-MWC 2019 ngoFebruwari 25
U-Sony ukhuphe ividiyo entsha ebonisa i-21 yayo entsha: Iscreen se-9 esiza kuvela kwiifowuni ezizayo, ezinje nge-Xperia 10 kunye ne-Xperia 10 Plus.
Isibhengezo esisemthethweni seSamsung ye-Samsung S10 iyavuza, iqinisekisa uninzi lweemfihlo zayo
Isibhengezo esisemthethweni seSamsung Galaxy S10 iye yavuza apho sinokubona iiasethi ezinkulu zeflegi elandelayo yenkampani yaseKorea.
Le iya kuba yi-Motorola Moto Mod 5G: ibonakele kwi-FCC
I-5G Moto Mod ivele kwi-FCC. Iinkcukacha zayo ezahlukeneyo ziye zafunyanwa kuluhlu lwamva nje lwearhente yokuqinisekisa yase-US.
Uphi umda wobungakanani kwiscreen se-smartphone?
Buza kude kangakanani ubungakanani bezikrini ze-smartphone? Iifowuni ezisongelayo zinokuba sisisombululo ekukhuleni okunganqandekiyo kwii-intshi
Umvelisi waseAsia uHauwei ubhengeze ngokusesikweni umhla weHuawei P30, oza kuba ngoMatshi 26 eParis.
Ukubheja kweXiaomi kuMncedisi kaGoogle kwaye ubonelele ngeMi 9 ngeqhosha elizinikeleyo ukufikelela ngokuthe ngqo kwelona lizwi laziwayo kwimarike
Fumana ngakumbi malunga neendaba esinokuzilindela kwiHuawei kwi-MWC 2019, eya kuqala kwisithuba esingaphantsi kweveki.
Fumanisa ngakumbi malunga ne-brand entsha ye-ARCHOS ye-smartphone ethe yatyhilwa ngokusemthethweni kwaye iya kubonakala kwi-MWC 2019 nayo.
Phantse abantu abayi-100.000 sele beyigcinile iXiaomi Mi 9
Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo ethi iXiaomi Mi 9 ibekeke e-China apho iboyisa khona abasebenzisi kwintengiso.
I-LG ayizukuvula i-smartphone esongelayo okwangoku
Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso ze-LG ngefowuni enokusongeleka, eya kuthi ilinde ithutyana ide ikhutshwe ezivenkileni.
Igosa: UXiaomi uya kubheja ekuphunyezweni kwabafundi abakwi-screen zeminwe kwinqanaba eliphakathi kulo nyaka
U-Wang Teng Thomas ubhengeze ukuba injongo yakhe ye-2019 kukuzisa umsebenzi "wescreen kwiminwe" kwimodeli ye-Xiaomi ephakathi.
Uluhlu lweefowuni ezintsha ze-Samsung A zeefowuni eza kufika ngoMatshi
Isamsung, inkampani yaseMzantsi Korea, izokwazisa uthotho olutsha lwee-smartphones ze-Galaxy A ukusukela ngoMatshi walo nyaka.
Ukuhombisa, ukunciphisa umzimba kunye nokuninzi ziimpawu zekhamera ezintsha eziza neXiaomi Mi 9
U-Lin Bin, umseki kunye nomongameli we-Xiaomi, kutshanje uqinisekisile ukuba i-Mi 9 izakufika neempawu ezintsha zekhamera.
Ifowuni ye-ZTE yeflegi ye-5G ye-smartphone ukuya ku-dn ngoFebruwari 25: iya kuba yiAxon 10 Pro
I-ZTE izokwazisa i-smartphone yayo yokuqala ye-5G ngoFebruwari 25 kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni eBarcelona, ​​eSpain. Isenokuba yiAxon 10 Pro.
Iqinisekisiwe ukuba i-Galaxy A50 iya kuba nenzwa yeminwe phantsi kwesikrini
Ukuvuza okutsha okunxulumene neGalaxy A50 kusibonisa ukuba esi siginali sitsha siya kuba njani nesenzwa somnwe phantsi kwesikrini.
I-OUKITEL C13 Pro: I-smartphone entsha kraca
Fumanisa ngakumbi nge-OUKITEL C13 Pro, i-brand entsha ye-smartphone eza kuphehlelelwa ngokusesikweni ngo-Matshi ezivenkileni.
IXiaomi Mi 9 ibonakala kwi-benchmark ye-Master Lu ene-12 GB ye-RAM
I-Master Lu, iqonga lomgangatho ovela eTshayina, labelane ngamanqaku okusebenza kweXiaomi Mi 9 ngeakhawunti yeWeibo.
I-Google Duo iya kudityaniswa kwi-OxygenOS ye-OnePlus
Iqonga lemiyalezo kaGoogle, uGoogle Duo, uya kudityaniswa kulungelelwaniso lomntu kwi-OnePlus
Isamsung ukuvula iivenkile ezintathu ezintsha eMelika
Isamsung iya kuvula iivenkile ezintathu ezintsha eMelika, iivenkile apho abasebenzisi banokuzama zonke iimveliso zenkampani ngaphambi kokuthenga.
Ukuvuza okungakumbi kwiHuawei P30 kunye neP30 Pro, abanye beza kukhanyela ulwazi kwaye abanye basixelela ngenkqubo kunye neekhamera
IXiaomi Mi 9 icwangciselwe ukuba ibe semthethweni ngoFebruwari 20. Ifoto ephilayo yayo kunye nebhokisi yayo yokuthengisa sele ivele.
I-LG ilungiselela ukumilisela i-V50 ThinQ 5G kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ukunikezelwa kwayo kuye kwavela kunye nomhla wayo kunye nexesha lokumiselwa ngokusemthethweni.
Isamsung isebenza ukubonelela ngeenkqubo zenethiwekhi ukuvavanya itekhnoloji ye5G ezayo kumazwe aliqela. Ifemi ithathe indawo yeHuawei.
UXiaomi unokumilisela i-smartphone ngekhamera ephumayo
UXiaomi unokumilisela i-smartphone ngekhamera ephumayo. Fumana ngakumbi malunga ne-smartphone enokuthi i-brand yase-China iqale kulo nyaka kwimarike.
Isamsung yazisa inguqulelo entsha ka-2019 yeGalaxy Tab A 10.1 eJamani
Isamsung yazisa eJamani inguqulelo ye-2019 yeGalaxy Tab A 10.1, inguqu engabizi kakhulu eneempawu ezifanelekileyo.
Izisombululo ezihluziweyo kunye nabakhuseli bekhusi beHuawei P30 kunye neP30 Pro
Ii-UAProfs zeHuawei P30 kunye neP30 Pro zibonwe kwaye zaqinisekisa izigqibo zazo. Yazi zonke iinkcukacha!
Itekhnoloji ye-Oppo ye-10X ye-zoom yetekhnoloji eya kwenziwa ngobunzima ukusuka kwisiqingatha sesibini se-2019
U-Oppo angabhengeza itekhnoloji ye-10x ye-zoom ye-Optical kwi-MWC 2019, ikwayileyo yayikhe yatyhilwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngoJanuwari.
IXiaomi Mi 9 izakufika ngokukhawuleza kwe-screen fingerprint sensor
IXiaomi Mi 9 izakufika ngesona sibonisi sikhawulezayo somnwe kuyo yonke into, ngokutsho kwesiqinisekiso sakutshanje esisemthethweni esikhutshiweyo.
Le mizekelo yeefoto ibonisa ukubakho kwekhamera yeXiaomi Mi 9
Uthotho lwemizekelo yezithombe sele ipapashiwe ebonisa onke amandla ekhamera yeXiaomi Mi 9. Ngaba uza kuyiphosa?
Ilungelo lokushicilela elitsha lika-Oppo le-smartphone lityhila uyilo lwalo
Iinkcukacha ezintsha zamalungelo awodwa omenzi wechiza ziye zavela zatyhila uyilo olutsha lwe-Oppo yokusonga ii-smartphones. Isixhobo sokuqala esingumzekelo siza kufika kwi-MWC 2019.
I-Elephone A6 Mini iyavela kwividiyo kwaye uyilo lwayo lutyhilwe ngokupheleleyo
Uyilo lwefowuni ye-Elephone A6 Mini luye lwavuza ividiyo esandula ukuthunyelwa. Ukugqitywa kwayo okulula, okuncinci kunye nokuhomba kunokubongwa.
I-Xiaomi, LG, Alcatel kunye no-Oppo banciphisile ukumiliselwa kweetshiphusi ze-NFC kwiifowuni zabo
Abavelisi abaliqela baseAsia bakucothisile ukuphunyezwa kwetekhnoloji ye-NFC kwiifowuni zabo ngezizathu ezahlukeneyo. Bazi ngakumbi!
Isamsung inokumilisela i-Galaxy A inyanga nenyanga
Fumanisa ngakumbi malunga nezicwangciso zeSamsung zokuphehlelela i-Galaxy eyahlukileyo inyanga nenyanga, njengolwazi oluvela kumajelo eendaba aphesheya.
Usekela-Mongameli weXiaomi uqinisekisa ukuba kuyakubakho iRedmi ene-Snapdragon 855
Usekela-mongameli weXiaomi uqinisekisile ukuba kuyakubakho iselfowuni ye-Redmi ene-Snapdragon 855. Oku kuyakufika phakathi enyakeni ngexabiso eliphantsi.
I-Xiaomi Mi 9 Edition Edition yeyona fowuni inamandla emhlabeni
UXiaomi uzokwazisa iXiaomi Mi 9 yefowuni ephambili ngoFebruwari 20. Kunyaka ophelileyo, inkampani yabhengeza ifowuni ...
I-Sony Xperia L3: ii-Specs, iiMpawu kunye neeRenders eziVuziweyo zoMgangatho oPhakathi olandelayo
USony uzimisele ukumilisela ii-smartphones ezininzi kwi-Mobile World Congress (MWC) 2019, e-Barcelona. Sele zininzi ...
I-Oppo R19 ayizukufika kulo nyaka, ngokuka-Sekela Mongameli wefemu
Phakathi kwamahemuhemu amaninzi kunye nezityholo zokuvuza kwe-Oppo R19, ekuthiwa yile nqanawa elandelayo ...
I-Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019): Iscreen esikhulu kunye nexabiso elifikelelekayo
Fumanisa ngakumbi malunga nokubalulwa, amaxabiso kunye nokuqaliswa kwe-Samsung Galaxy Tab 10.1 (2019), ithebhulethi entsha yohlobo.
Iifowuni zokuqala eziza kuhlaziya kwi-MIUI 11 iqinisekisiwe
Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu lwe-Xiaomi kunye neRedmi ii-smartphones eziya kuba nakho ukufikelela kwi-MIUI 11 kwisiqingatha sesibini salo nyaka.
I-Galaxy Note 8 iqala ukuhlaziya kwi-Android Pie
Fumana ngakumbi malunga nohlaziyo kwi-Android Pie ngoku ezinzileyo kwiGlass Qaphela 8 kwamanye amazwe aseYurophu.
UXiaomi uqinisekisile iimpawu zeXiaomi Mi 9, ukongeza kuyilo lwayo kunye nexabiso leetheminali ezintsha zefemu yaseAsia.
Zonke izixhobo ze-Samsung Galaxy S10 esiza kuyibona ngexesha lokuboniswa kwesixhobo sele zihluziwe, zigqamisa izinto zokunxiba ezinomdla.
I-Galaxy Tab ye-S5e: Ithebhulethi entsha ye-Samsung
Fumana ngakumbi malunga nokuchazwa kweGalaxy Tab S5e, ithebhulethi entsha yeSamsung esele ihanjisiwe ngokusemthethweni.
IGPS S9 ifumana indawo yokhuseleko ngoFebruwari
Uhlaziyo lokhuseleko lwenyanga kaFebruwari ye-Samsung Galaxy S9 ngoku iyafumaneka eYurophu nge-OTA
Nge-24 kaFebruwari, ibonakalisiwe kwakhona kwikhalenda, uXiaomi uza kutyhila iMi 9 entsha, ekwabelana ngokuqaqamba nezinye iifemu ezibalulekileyo.
Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwe-Samsung ye-M20 ye-Yurophu eYurophu eya kwenzeka kungekudala emva kwezi ndaba zifikile.
Imfonomfono yaseTshayina kwezonxibelelwano uHuawei iyaqhubeka nokuzama ukubuyisa ukuthembela kubalandeli bayo kunye nabathengi kwinethiwekhi ye5G.
ILenovo idale uhlobo lwayo olutsha lweLemeng Mobile ebhengezwe ngokusesikweni kwaye izakwazisa iifowuni zemultimedia, fumana okungakumbi ngayo
I-Energizer Power Max P18K Yenza i-smartphone ngebhetri ye-18.000 mAh amandla esele ibonisiwe eMelika ngaphambili.
Igosa: I-LG G8 ThinQ iya kuba nesiboniso seCrystal Sound OLED ngetekhnoloji yesandi
I-LG iya kuphehlelela i-smartphone yayo elandelayo, i-LG G8 ThinQ, ngexesha leNkomfa yeHlabathi yeHlabathi (i-MWC 2019) ekugqibeleni ...
Le iya kuba yi-smartphone esongelayo evela kwi-IQOO, uphawu olutsha lweVivo
Ukuvuza okuvela eTshayina kwabelane ngeenguqulelo zefowuni yokusonga ye-IQOO. Le iya kuba yeyokuqala kwinkampani ezelwe phantsi kweVivo.
Ithebhulethi ekumgangatho ophakathi evela kwi-Samsung ihamba ngeGeekbench
Isamsung isebenza kwithebhulethi entsha yaphakathi kwebanga esele igqithile kwiGeekbench kwaye sikubonisa iinkcukacha
Ukucocwa kweenkcukacha kunye namaxabiso eSony Xperia 10 kunye ne-10 Plus [+ Renders]
I-Sony Xperia XA3 kunye ne-XA3 Ultra ayizubizwa njalo. Endaweni yoko, baya kubizwa ngokuba yi-Xperia 10 kunye ne-10 Plus. Iimpawu zayo, amaxabiso kunye nokunikezelwa okutsha kuye kwavuza.
Silindele ntoni kwiXiaomi ye-MWC 2019?
I-MWC ikufutshane nekona kwaye iXiaomi inokuba yenye yezona zinto ziphambili ukuba igqiba kwelokuba ibonise ezinye zeemveliso ezilindelweyo.
Ukunikezelwa kokuqala kweXiaomi Mi 9 Explorer Edition: iya kufika ineekhamera ezine zangasemva!
Unikezelo lokuqala lweXiaomi Mi 9 Edition yoHlelo luvele kwi-Intanethi. Uyilo lwayo lwangasemva lutyhila ukuba icacile kwaye inezixhobo ezine zekhamera.
Isamsung iqhubeka nokuhlaziya i-Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge 4 kwiminyaka kamva
I-Samsung Galaxy S6 kunye ne-S6 Edge bafumene uhlaziyo olutsha lokhuseleko, nangona okwangoku kuphela kwiimodeli ezithengiswa kwi-UAE
I-OUKITEL C15 Pro: I-smartphone entsha enotshi ekubunjweni kwethontsi lamanzi
Fumanisa okungakumbi malunga ne-OUKITEL C15 Pro, i-smartphone entsha enenotshi yokulahla amanzi kwi-Chinese brand esele ihanjisiwe ngokusemthethweni.
Iakhawunti yezixhobo ze-OS ze-OS ezingaphantsi kwe-10% yentengiso yase-US
Inkqubo yokusebenza kaGoogle yeewatchwatches yeyona isetyenzisiweyo, ngokophando lwamva nje olupapashwe eMelika.
Ipowusta entsha ye-Oppo F11 Pro ityhila i-sensor ye-MP eyi-48
U-Oppo wabelane nje ngeposta yovavanyo lwe-Oppo R11 Pro ekudala ilindelwe kwi-Twitter. Umteketisi, yintoni ...
Inkqubela phambili enkulu kaXiaomi kwimakethi ye-smartphone yaseIndiya ikwiziko le ...
Fumana ngakumbi malunga nomhla eya kuthi iXiaomi Mi 9 ihanjiswe ngayo njengoko kuchaziwe kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo kunye nobukho begama kwiMWC 2019.
IGadgetbridge, indawo evulekileyo engenye kwiLitye, iMi Band kunye nezinye iiapps
Ukuba unayo enye yezinto ezinxibekayo ezihambelana neGadgetbridge, ungazitshintsha ii -apps zazo ezisemthethweni kwaye ke uzimele.
Ubungakanani bebhetri ye-Samsung Galaxy A50 iqinisekisiwe emva kokuqinisekiswa kwefowuni
I-Samsung ye-Samsung A50 yenye yee-smartphones ze-A eziza kuqaliswa yi-Samsung kulo nyaka. …
Unikezelo olutsha lwe-LG G8 ThinQ ifikile ekukhanyeni. Le ityhila zonke ii-angles zefowuni kwaye yatyhilwa ngu-Evan Blass.
IMotorola P40 iya kuba yifowuni yokuqala yenkampani ukuba ifike ngescreen esigqibeleleyo. Emva koko, uya kuba ne-Exynos 9610 SoC.
Iifoto zokwenyani zeXiaomi Mi 9 avuza bukhoma: ezinye iinkcukacha zityhilwe
Imifanekiso emitsha ephilayo yeXiaomi Mi 9 ivele kwaye ezi zisibonisa omabini amacala efowuni kunye nokubalulwa okuthile.
Imifanekiso yokuqala ye-Galaxy Watch esebenzayo kunye ne-Galaxy Buds entsha ihluziwe
Kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba umboniso we-Galaxy Watch Active kunye neGlobal Buds, imifanekiso ye-interface kunye noyilo ikhutshiwe.
Inqaku leRedmi 7 lithengisa iiyunithi zesigidi ngaphantsi kwenyanga
Fumanisa ngakumbi malunga nentengiso iRedmi Qaphela i-7 ebinayo kungaphelanga nenyanga ithengiswa e-China apho sele iyimpumelelo kwi-brand.
I-OnePlus 6 kunye ne-6T zifumana uhlaziyo olutsha lokhuseleko
Uhlaziyo olutsha lukhutshwa kwi-OnePlus 6 kunye ne-OnePlus 6T. Uhlaziyo luzisa indawo yokhuseleko kaJanuwari kuzo zombini izixhobo.
I-ZTE Axon 10 Pro iqinisekisiwe yiarhente ye-ECC: ukumiliselwa kwayo kusondele kwaye kusondele
Igama lesidlaliso iAxon 10 Pro ngoku liqinisekisiwe luluhlu lwayo kwiKhomishini yezoQoqosho yase-Eurasian (i-EEC), apho sele iqinisekisiwe nje.
IVivo ibhengeza i-IQOO, uphawu lwayo olutsha
Fumanisa ngakumbi malunga ne-IQOO, uphawu olutsha olwenziwe yiVivo kwaye luya kugxila kwicandelo lokudlala i-smartphone kwi-Android.
Ukuvuza kwiividiyo zezandla kwi-Sony Xperia XA3: umlinganiselo wesikrini esiphezulu uqinisekisiwe kwakhona
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, iifoto ezibukhoma ze-Sony Xperia XA3 ezayo ivele kwi-Intanethi. Nangona i ...
I-beta yesine ye-Android Pie ye-Samsung Galaxy Note 8 ngoku iyafumaneka
Isamsung isandula ukukhupha i-beta yesine ehambelana ne-Android Pie yeGlass Note 8, kwiveki emva kokumiliselwa kweyesithathu.
Ishishini le-Android lityhila iinkcukacha ezithile eziphambili zeNokia 9 Pureview
Iinkcazo eziphambili zobuchwephesha zeNokia 9 Pureview sele zivuziwe kwiwebhusayithi yeShishini le-Android. Kukho iinkcukacha ezininzi eziqinisekisiweyo.
IXiaomi Mi 9 isondele kwaye isondele: ngoku ivele kwi-TENAA
IXiaomi Mi 9 iye yavuza kwi-arhente yesatifikethi kunye nokuvunywa kwe-TENAA. Ukongeza, kutyhilwe ukuba isixhobo singasungulwa kule nyanga.
Isikhangeli seSamsung sikhutshiwe amaxesha ezigidi
Isikhangeli seSamsung sifike nje kwisigidi esinye sokukhutshelwa kwiVenkile yokuDlala, inani elingaqhelekanga xa ucinga ukuba ayisiyo app kaGoogle.
UDonald Trump ukuba atyikitye i-oda elilawulayo ethintela abaqhubi ekusebenziseni izixhobo zenethiwekhi zaseTshayina
Kubonakala ngathi ngoku uHuawei uza kujongana ne-veto entsha e-United States. Ukusetyenziswa kwezixhobo zenethiwekhi zaseTshayina kuya kuvalwa.
I-Sony Xperia XZ4 ihamba ngeGeekbench kwaye iziphumo zayo ziya kothuka
Iflegi ezayo ye-Sony Xperia XZ4 ithathe ukhenketho lwe-Geekbench kunye nokurekhoda amanqaku anomdla.
I-Samsung Galaxy S10 + kunye ne-1TB yokugcina inokuza kamva
Fumanisa ngakumbi malunga nokulibaziseka okunokwenzeka ekumiselweni kwale nguqulo ye-Samsung Galaxy S10 + kunye ne-1 TB yokugcina kwangaphakathi.
Ezona gadget zibalaseleyo zokunikwa ngomhla weValentine
Namhlanje siphakamisa ezona ndlela zintlanu onokukhetha kuzo ukuze ufumane esona sipho sobugcisa seValentine, umangalise iqabane lakho ngobuchwephesha be-state-of-art
I-Nubia iya kuzisa isixhobo sokusonga kwi-MWC 2019
Fumana ngakumbi malunga nokunikezelwa kweNubia kwi-MWC 2019 apho baya kuthi ngokusesikweni babonise isixhobo esisongelayo.
IHuawei ikhula e China ngelixa iApple inciphisa ukuthunyelwa kwayo
Ukuthunyelwa kwe-iPhone ye-Apple ngekwehle nge-20% e-China, enye yeemarike ezinkulu emhlabeni. IHuawei isebenzisa ithuba kwaye izuza umhlaba.
Ukunikezela ngento eza kuba siselfowuni yokusonga iXiaomi
Iqela beliphethe ekunikezeleni ividiyo eboniswe nguXiaomi ukusinika umbono ongcono wokuba iya kuba yintoni iselfowuni esongelayo.
Inqaku leMeizu 9 liza kufika ngoFebruwari 14 [ipowusta esemthethweni]
Inqaku le-Meizu 9 liza kufika ngoFebruwari 14, umhla ekubhiyozelwa ubuhlobo kunye nothando. Oku kutyhilwe ngumfanekiso omtsha osemthethweni.
I-Moto RAZR 2019 yevidiyo kunye nokunikezela ngokuvuza: iinkcukacha kunye noyilo kutyhilwe
Iselfowuni ye-Motorola esongelayo, ehamba ngegama elithi "Moto RAZR 2019", iye yavuza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nevidiyo yengcinga.
IPixel 3A ibonakala kwiGeekbench kwaye ibonisa ezinye zeenkcukacha zayo
Isiphelo sendlela, esibizwa ngokuba yi "Pixel 3A", siye savuza ibhentshi leGeekbench. Oku kunokwenzeka ukuba yiPixel 3 Lite kaGoogle.
IHuawei P30 Pro inokwahluka kwe5G, kodwa iya kuthengiswa kuphela eYurophu
U-Huwei uzokwazisa i-5G inguqulelo ye-P30 Pro eYurophu, ngokwamarhe amva nje athe avele. Funda ngakumbi ngayo.
IMoto G4 Plus ekugqibeleni ifumana i-Android Oreo: iqale eMelika
I-Moto G4 Plus sele ifumana uhlaziyo lwe-Android Oreo, njengoko kudala ilindile.
Fumanisa ngakumbi malunga nokwaziswa okubomvu kwale nguqulo intsha yeBlackBerry KEY2 eza kwenzeka eYurophu kungekudala.
Fumanisa okungakumbi malunga noyilo oluhlaziyiweyo olunokuphinda kusongelwe i-Motorola RAZR ngokuya ngale vidiyo yeengcinga ekuvumela ukuba ubone ukuba isebenza njani.
Ukuba ufuna ukonwabela iphepha lodonga lokuqala leGPS S10 ngoku, nantsi indlela yokukhuphela.
Umphathi omkhulu weRealme utyhile ukuba baceba "ukuvula iivenkile ezizodwa eIndiya apho abathengi abanokubakho bafumana amava ahlukileyo.
Umanyano lwakudala lwaseMelika eAsia, Thailand, luye lwadibana neHuawei kulwakhiwo lwe-teknoloji yovavanyo lwe-5G.
Ngaphambi kokumiliselwa kwe-LG G8 ThinQ, ixabiso layo laseCanada liye lavuza. Ngokusekwe kwiziphumo, kuya kubiza kakhulu.
Ipowusta evuzayo ye-OPPO F11 Pro
Fumanisa ngakumbi malunga neposta yokuqala ye-OPPO F11 Pro, i-brand entsha ye-brand, kunye nedatha yokuqala evela kwiikhamera zayo.
Le yimibala ye-Samsung Galaxy S10 eya kuthi ithengiswe
Fumanisa imibala eya kuthi isungulwe ngayo i-Samsung Galaxy S10 ezivenkileni ngenxa yokuvuza okutsha okufike kwiiyure zamva nje.
Iifoto ezibukhoma zeSony Xperia XA3 ziyavela kwaye uninzi lwezinto eziphambili zichaziwe
Ibhlog yobuchwephesha yaseJapan yabelane ngemifanekiso eyiyo yeSony Xperia XA3 ukuveza uyilo kunye nokubonakala kwayo ngokupheleleyo. Fumanisa!
Ipowusta esemthethweni ye-Oppo R19 ityhila ukuba iyakufika ngenzwa ye-MP eyi-48
I-Oppo R19 iya kuba yenye yee-smartphones ezilandelayo zenkampani yaseTshayina. Esi sixhobo siza kufika ngenzwa ye-MP eyi-48, ngokwe-poster esemthethweni.